ကဗျာငယ်လေး :: partner
Homepage > ကဗျာငယ်လေး
ကတိတွေလည်း မပေးနဲ့s♥rry လို့ လဲမပြောနဲ့ငါ့မျက်လုံးကို သေချာကြည့်ပြီး တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်လို့ ပဲပြော အရာအားလုံးကို နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးလိုက်မယ်.................
အရာရာဟာ ပြီးဆုံးသွားပြီလား ကိုယ်တော့မထင်ပါဘူး ဖွင့်ဟကြိုးစားဖို့ အခွင့်အရေး မပေးတော့ဘူးပေါ့... တားဆီးနေတာတွေက ဘာတွေလဲ အားလုံးဟာ သမရိုးကျဆန်စွာလို့တော့ မပြောနဲ့နော် ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်.
ငါဟာနင့်ရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆိုရင် နင်နှုတ်ခမ်းထက် ငါကြွေကျပြီး နင့်နှလုံးသားထဲထိ စီးဆင်းမယ်။ နင့်သာ ငါရဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆိုရင် ဒီတစ်သက် ငါမငိုတော့ဘူး။ နင့်ကို ဆုံးရှုံးမှာစိုးလို့ပါ။
အချစ်ဆိုတာ မတိမ်ကောသရ်ျ အချစ်ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်မြစ်က အမြဲ ဆီဆင်းနေမှာပါ
U See I See နှစ်ယောက်စီးတော့ ဆိုက္ကားလေးတာပေါ့။U Say I Say နှစ်ယောက်ဆေးတော့ ပန်းကန်ပြောင်တာပေါ့။U Know I Know နှစ်ယောက်နိုးတော့ သူခိုးမကပ်တာပေါ့။U Chat I Chat နှစ်ယောက်ချက်တော့ အမြန်ကျက်တာပေါ့။
ငါမငိုဘူး .. ♣ ..မျက်ရည်တော့ကျဖြစ်တယ် ....... ငါအသဲမကွဲဘူး .. ♣ ..ရင်ထဲမှာတော့အောင့်သက်သက်......ငါမရှုံးဘူး .. ♣ ..ခေါင်းငိုက်စိုက်တော့ဖြစ်နေတယ် .......ငါမလွမ်းဘူး .. ♣ .. ဖွဖွလေးတော့သတိရမိတယ် ...
မရွာဖြစ်သေးတဲ့ မိုးရေတွေ လေးလံနေတဲ့ ငါ့ ကောင်းကင် တိမ်တိုက်တွေ အထပ်ထပ်၊ ငါ့ ရဲ့ အခွံသက်သက်မီးအိမ်မှာ ထွန်းညှိမယ့် ပန်းတစ်ပွင့်မင်းမဖြစ်သေးသမျှ အထီးကျန် ဆန်နေရဦးမယ်။....။
အ သဲ စား ဘီ လူး မ အိပ် မက် ထဲ ထိ လာ လာပြီး ပြဲ ပြ ပြူး ပြ နင် လုပ် ချင် တိုင်း လုပ် နေ ရ အောင် ဒီ င နဲ က အ ရူး လား မ ထူး ပါ အခု ဘ၀ အ ရူး က တစ် မူး သာ လို့ မ ရ ဒိုး တော့ အ ရူး မ
မင်းရင်ခွင်ထဲမှာ ... ငါ့ ထက် ချစ်ရမယ့် သူ ...ရှိလာမယ့်.....တစ်နေ့ မမုန်းပစ်ပဲ..... ထားရစ်ခဲ့ ပါ မမေ့ ပစ်ပဲ.... ကျောခိုင်းသွားပါ... တခြားသူကိုရင်ခွင်ထဲထား .........ခပ်ပါးပါးလေးပဲ .....(ငါ့ ကို) သတိရပေးပါ .....♥
မြန်မာလို ချစ်တယ်။ ဂျပန်လို aishiteru ။ အင်္ဂလိပ်လို I love you. သင်္ချာလို ၁၅၀၀။ ပထ၀ီလို ရေမြေဆုံးတဲ့ အချစ်နဲ့ သမိုင်းလို မော်ကွန်းထိုးပြီး ချစ်ချင်လို့ Bio term အရ တို့ရဲ့heart နှစ်ခုဟာ Chemistry term အရ reaction လုပ်နိုင်
ဆရာကျတဲ့နင့်ကိုခါချတယ်.... လာလာမစနဲ့.. ငါ့BF ကနင့်ထက်ပိုပြီး.. အထာကျတယ်.....လူလာမမှားနဲ. ရူပါကတူတာရှားတယ်~ ကောင်လေး.... နင်...စမူဆာကုလားမနဲ... ယူပါလား စူပါစတားပဲ ....
ငါ.နှလုံးသားက ရယ်နေတဲ. ငါ.နှုတ်ခမ်းကိုပြောတယ် သူလဲပျော်ချင်တယ်တဲ. အဲဒီတော. မျက်ရည်လည်နေတဲ. ငါ.မျက်ဝန်းက ငါ.နှလုံးသားကို ပြန်နှစ်သိမ်.တယ် သူလဲဟန်ဆောင်နေတာပါကွာတဲ့
နှလုံးသားက LOCK ကျပီး BRAIN က အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အခါ ရင်ခုန်သံတွေတောင် အသက်ရှူမမှန်ချင်တော့ဘူး.....
Fri တွေက မေးကြတယ် မင်းအသဲကွဲနေလားတဲ့ ငါပြန်ပြောလိုက်တယ် ငါကငါ့ကိုမချစ်တော့တဲ့ လူတယောက်ဆုံးရှုံးတာ သူကသူ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ သူတယောက်ဆုံးရှုံးတာ ငါဘက်ကနေသာကြီးပါလို.
မင်းအသဲကွဲနေလားတဲ့ ငါပြန်ပြောလိုက်တယ် ငါကငါ့ကိုမချစ်တော့တဲ့ လူတယောက်ဆုံးရှုံးတာ သူကသူ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ သူတယောက်ဆုံးရှုံးတာ ငါဘက်ကနေသာကြီးပါလို.
ကြယ်မကြွေဘဲ ကောင်းကင်ပြိုကျတဲ့ ညမှာ.. အသည်းနှလုံး အပိုင်းအဆတွေ အလည်လွန်ကြတော့ ကြေကွဲမှု့တွေက လိုက်ထိမ်း ဆွေးမြေ့မှု့တွေက လေမတိုက်ဘဲ ယိမ်းကြတာပေါ့...။
ရင်ထဲမှာဝေဒနာခံစားနေရပေမဲ.လည်း ပြုံးပြခဲ.ပါတယ် ဒါပေမဲ.ပီပြင်ရဲ.လားတော.မသိဘူး ရင်ထဲမှာတော.အောင်.သွားတယ် သိလိုက်ရတာက ငါ.နှလုံးသားကအခုထိမရင်.ကျက်သေးပါလားနော်
ငါမှားတာရှိရင် ဆောင့်ကန်ုပါတယ် ရေးးးးးးးးးးးးးးးး အိုး.......... မင်းရဲ့ အနားမှာပဲ သံမှိုစွဲကပ်ထားတဲ့ သံလိုက်တို့ရှိတယ် မင်းရဲ့ စကားတွေ ခါးနေသေးတယ်............ရေ. နင်ရယ် ခွဲလို့မသွားပါနဲ့ ( ရေအိုး
တောက်..............တရားစွဲလို့မရလို့ပေါ့ ရလို့ကတော့. . အိမ်မက်ထဲမှာ ပိုက်နက် ကျူးလွန်မူ. . . စိတ်ကူးတွေကို လွှမ်းမိုးထားမူ. . ရင်ခုန်နှုန်းမြန်အောင်လုပ်မူနဲ့. . . နင်ဒီတသက် အပြင်တောင်ရောက်မှမဟုတ်ဘူး
မင်းမချစ်ရင်လည်း အဝေးက ကြည့်နေရုံပဲပေါ့ ငါကို ချစ်ပါလို့ ပြောခွင့်မှ မရှိတာ မင်းမုန်းရင်လည်း အဝေးက ချစ်နေရုံပဲပေါ့ ငါကို မမုန်းပါနဲ့လို့ တားခွင့်မှ မရှိတာ
မြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး.. အနေနီးလို့ချစ်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး.. အပြောကောင်းလို့ခိုက်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး.. နှလုံးသားကချစ်လိုက်ဆိုလို့.. ချစ်ခဲ့မိတာ
ငှက်ကလေးတွေကမေးတယ်... မင်းမှာ ချစ်သူအများကြီးရှိလားတဲ့... ငါကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်... ချစ်သူအများကြီးမရှိပါဘူး... ဒါပေမယ့်...ရှိတဲ့တစ်ယောက်ကို အများကြီးချစ်ပါတယ်လို့
အလိမ်အညာမဟုတ်ဘူး အမှန်အကန်ပါချစ်သူ မင်းချစ်လာမဲ့ နေ့ ကို တိတ်တိတ်လေးမျှော်လင့်နေမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်တော့ရှိတယ် မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့ ပေါ့ကွာ---
မင်းက ငါ.ရဲ.Subject ...ငါက မင်းရဲ.Object...အချစ်ကတော. Main Verb ပေါ....သစ္စာနဲ.မေတ္တာ က Helping Verb ပေါ့...သံယောဇဉ်က Conjunction...ကောင်းမွန်သော ကံတရားကသာ Situation ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အနာဂတ် အတွက်လုံလောက်တာမို. Full Stop
ပိန်တော့ဆေးသမား....... ၀တော့အရက်သမား..... စော်မရှိတော့အခြောက်တဲ့......... ရှိပြန်တော့နှာဘူးလို့ပြော အောင်မြင်တော့ကြက်ကန်းတိုး.... ရှုံးတော့စောက်သုံးမကျဘူးတဲ့ .................... ဟ ဟ .. စိတ်ပျက်တယ်....း(
ဤကမ္ဘာလောက၌ အခက်ခဲဆုံးအရာသည်ကား အင်မတန်ပေါက်ကွဲ နေသော ဒေါသအမျက်တို့အား ချူပ်တီး၍ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်
လွမ်းလားလို့မေးရင် လက်ကလေးကိုပိုက် ခေါင်းကလေးကို စိုက်ပြီး ကလေးလေး တစ်ယောက်လိုရိုး⁠ရိုးလေးပြောလိုက်မယ်....(မလွမ်းလောက်ပါဘူး)...(^_^)
»♥နင်ပျင်းမှ ဟိုင်းရအောင် ငါနင့်ပျော်တော်ဆက်မဟုတ်ဘူး နင်မေးတိုင်းဖြေရအောင်လည်း ဒါရဲစခန်းမဟုတ်ဘူး နင်မုန်းချင်တိုင်းမုန်းရအောင်လည်း ငါ့နင့်ရည်းစားမဟုတ်ဘူး ရှင်းတယ်နော်♥»
ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိတယ်။ ဘဝရှိရင်နာကျည်းချက်တွေရှိမယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ နှလုံးသားရှိရင် အချစ်ရှိမယ်။ အချစ်ရှိရင် ရင်နာစရာနဲ့ လွမ်းစရာတွေရှိလာရော...။
‎"မနက် အိပ်ယာထက် နိုးရခက် အိန်ဂျယ်ဆိုတဲ့နတ်သမီး တစ်လက် အိမ်မက်ထဲထိ ၀င်နှောင့်ယှက် အရမ်းသတိရတယ် နတ်သမီး မမေ့နိုင်တော့ဘူး ဒီတစ်သက်"
မဖြစ်နိုင်မှန်းကို သိထားလည်း ချစ်မိတာသွား အပြစ်လား... မဖြစ်နိုင်တိုင်း မချစ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူတွေကများမိန့်ဆိုခဲ့လဲ ... မဖြစ်နိုင်လဲ အမြဲဆက်ချစ်နေချင်တယ် .........
♥...♥¸.•*´`*♥...♥*´`*•.¸♥...♥မင်းရဲ့ စကားလုံးတွေက♥...♥မုသားဖြစ်ပေမဲ့ ♥...♥့ ငါပျော်ရွင်နေရမယ်ဆိုရင်♥...♥်ဆက်ပြီးသာလိမ်ပေးပါတော့ ♥...♥့ချစ်သူရယ်♥...♥¸.•*´`*♥...♥*´`*•.¸♥...♥ L۪۫۰۪۪۪۫۫۫O۪۫۰۪۫V۪۫۰۪۫E۪۫ ۰۪۫Y۪۫۰۪۫O۪۫۰۪۫U۰_♥♥♥_♥♥♥ ♥_
ကြိုးခုန်သလိုပါပဲ-- အခုန်မတက်တော့ ကြိုးနဲ့ငြိပြီး မှောက်ရက်လဲသလိုပေါ့.။ ရင်ခုန်သံတွေ အခုန်မတက်တော့ သံယောဇာဉ်ကြိုးကြောင့် အချစ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာ ဟပ်ထိုလဲရပြန်ရော
ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသောရင် အက်ဆစ်မိုးတွေရွာပေးလာသူ နှလုံးသားကို ဓားနဲ့ခွဲ ရေဆေးပြီးတော့ ဆားနဲ့နှယ် သစ္စာတရားတွေပါဆယ်ထုတ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာနင်ထားခဲ့သလဲ
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ သုံးလက်မလောက်သာ ရှည်တဲ့လျှာက ခြောက်ပေလောက်မြင့်တဲ့ ယောကျာ်းကြီး တစ်ယောက်ကို ဗုန်းဗုန်းလဲကျသွားစေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ခင်ဗျားကြားဖူးသလား
ပြီးခဲ့တာတွေလဲ ပြီးခဲ့ပါပြီ.. မင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ငါ ဘယ်နေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပြီပဲ.. ငါကျေနပ်ပါတယ်...ငါတကယ့်ကို ကျေနပ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် မင်းကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး.. မမုန်းဘူး.
ကြက်သွန်တွေ နာကြင်တက်သလားဆိုပြီး တစ်လွှာချင်းခွာကြည့်တင်္ရ သူတို့ကျတော့ ဗလာ ကိုယ်မှာသာ မျက်ရည်တွေကျလို့-------
ငါနဲ့ဝေးတဲ့အခါ နင်ဘယ်လိုနေသလဲ ဆိုတာ သိချင်သလို..................နင်နဲ့ဝေးတဲ့အခါ ငါဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာ သိစေချင်တယ်....................
နေပါစေ ချစ်သူ နင်နဲ့ဆက်တွဲရမှ ငါအချစ်စစ်တွေမြဲနေမယ်ဆိုရင် ငါ့ရင်ကိုခွဲ နှလုံးသားကိုထုတ်လိုက်မယ် ငါ့ရဲ့ဘေး နင်မရှိပါနဲ့တော့…..။ နေပါစေ ချစ်သူ နင်ရှိမှ ငါ့ဘ၀ စိုပြေမယ်ဆိုရင် နာရီတွေနောက်ပြန်ဆွဲ နင်မပါဝင်တဲ့ အတိတ်တွေထဲပဲ ငါပျော်မွေ့လိုက်မယ်……။ နေပါစေ ချစ်သူ ငါမသိသေးတဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အယုံသွင်း ငါသနားအောင် နင်ဖန်ဆင်းနေရင် ငါမှတ်မိနေတဲ့ နာကြည်းစရာတွေနဲ့ပဲ ငါ့ရင်ခုန်သံကို အသစ်ပြောင်းလိုက်မယ်….
ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ. အချစ်နယ်ပယ်တစ်စွန်းတစ်စကို စပြီးခြေလှမ်းလိုက်တာနဲ.တောင် ဒီလောက်ထိမွန်းကြပ်မှုတွေနဲ. ပြွတ်သိပ်နေ၇င် ကြာလာ၇င်လမ်းပျောက်မှုတွေနဲ. ငါလမ်းမှောက်တော.မယ်ထင်တယ်
သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တုန့်ပြန်မှုဆိုတာရှိတယ် မင်းတို့ရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ငါကတုန့်ပြန်လို့ ပြင်းထန်သွားရင် တာဝန်မယူဘူးနော်
ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး သိစေချင်တာ မမေးရဲပါဘူး ဖြေစေချင်တာ စကားလုံးတွေလည်း မဟုတ်ဘူး ကာရန်လေးတွေပါပဲ မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာပဲ ဖြေပေးပါ အချစ်ရယ်
အနားမှာရှိတဲ့သူတိုင်းကို မချစ်ချင်ပါဘူး..... ချစ်တဲ့သူကိုပဲ အနားမှာရှိစေချင်တာပါ....
Shoe ကိုမြင်တော.စီးမိတယ်...Street ကိုမြင်တော.လျှေက်မိတယ်...Chatting Shop ကိုမြင်တော.ဝင်မိတယ်...Computer ကိုမြင်တော.ဖွင်.မိတယ်...Gtalk ကိုမြင်တော.ချက်မိတယ်...Account ကိုမြင်တော.ဟိုင်းမိတယ်...You ကိုမြင်တော.ချစ်မိတယ်...?
သင်္ချာသီအိုရီအရ မျဉ်းပြိုင်2ကြောင်း ဟာ Infinity မှာဆုံတာမှန်ရင် တနေ့ပြန်ဆုံမှာပါ.......
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျာ.. တယောက်တ၀က်စားရမယ်.. ဘယ်လိုခေါ်မလဲ.. လာပါဦးပေါ့.. တစ်စုံတစ်ရာ နှစ်စုံနှစ်ရာလေ.. တ၀က်ကို ငါးဆယ်ပေါ့.. ဆိုတော့က မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကွာ.. စောနက ပြောသွားသလိုပေါ့.. :P
♫ if i have to choose between loving you and breathing then i will choose breathing to say i love you............. (ငါ့ရဲ့အသည်းနှလုံးက မင်း1ယောက်တည်းတွက်ပါ။ ဘယ်လောက်ထိကြာစောင့် စားရလည်းမင်းတွက်ပါ။မင်းကို သေထိတိုင်စောင့်နေမယ်)
ပန်းခူးရင်း .............သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နေရင်း..............သီချင်းနားထောင်ရင်း...........နင်ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ.............
ကို တို့ နှစ်ယောက် မတွေ့ ရသေးပေမဲ့... အမြဲတမ်း မင်းလေးရဲ့ အရိပ်ထက် ပိုတဲ့ ကို ရဲ့စိတ်က မင်းလေး နားမှာ အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ .......ချစ်သူလေး ပျော်ရွှင်ပါစေ ..............
နောင်တတော့ မရချင်ပါဘူး.... ငါလိုချင်တာက ...... စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကင်းတဲ့ အချစ်ပါဟာ... မိုးရွာသလို အားလုံးအတွက် မဟုတ်ပေမယ့် ..... နင့်အတွက်တော့ ငါက အေးချမ်းစေမှာပါ ....
အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အသည်းကို ငါခွဲလိုက်တယ်။ သူအသည်း အက်သံကိုငါကြားလိုက်တယ်။
ချစ်သူကိုကျောခိုင်းပြီး လှည့် ထွက်လာမှ ခုနကအသည်း အက်သံဟာ ငါ့ ရင်ဘတ်ထဲကဟာမှန်း ငါသိလိုက်တယ်။
ဘယ်လိုအရာတွေ မပြည့်စုံရင်နေပါ..မင်းဘေးနားရှိနေရင် အရာအားလုံးပြည့်စုံသွားသလို မင်းမရှိရင် လိုအပ်ချက်တွေများလွန်းတယ် ချစ်သူရယ်------
ဦးနှောက်နဲ.နှလုံးသား တိုက်ပွဲဝင် ငါ.အသည်းက စ⁠စ်မြေပြင် ငါ.အချစ်လည်း မြေဇာပင် ချို.ယွင်းလာတော.မယ် မကြာခင်.....။
လူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ အမုန်းတွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဘ၀တလျှောက်လုံး အဲဒီဒုက္ခကို သယ်မသွားပါနဲ့။ ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာ အမြင့်မြတ်ဆုံး စိတ်ဓါတ်ပါ။ မင်း မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုတောင် မေတ္တာထား
ငါဘက်ကမှားတာပါတဲ့ --- G-Lattကပြောတယ် နှစ်ယောက်စလုံးမှားခဲ့တယ်--- အောင်လ ကတော့ မှားတာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့--ငါကရော.. ဘာပြောရမလဲ??
ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းလဲသွားပါစေ.. ဒီရင်ခွင်မှာ အရင်ထက် မင်းကိုပဲ လိုတယ် :|
မင်းကိုလွမ်းတိုင်းသာ ကြယ်တစ်လုံးကြွေမယ်ဆိုရင် လမင်းကြီး အထီးကျန်တော့မှာပဲနော်.
ငါသည် သူ့ကိုချစ်၏။ ထိုသို့ချစ်သောကြောင့် ခံစားရသော ဒုက္ခသည် ကြီးစွ၊ ထိုဒုက္ခသည် ကြီးစွာသော ပီတိကိုဖြစ်စေ၏။ ဟိသစ္စံ ဤစကားမှန်၏၊ ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် ငါသည် ဘ၀ဆက်တိုင်း "ချစ်တတ်သောကိုပိုင်ဆိုင်ရလို့၏.
ငါ့ရင်ကို နင်ဖန်တီးလို့ ရသလို... ဖျက်ဆီးသွားလို့ လဲရပါတယ် ... အရာရာမင်းခံယူချက်တွေ အတိုင်းပေါ့... နင်ပေးမဲ့နေ့ ရက်တွေကို ... မမျှော်လင့်စွာနဲ့ ပဲ အဝေးက ဟိုးအဝေးဆုံးက... နင်မသိနိုင်တဲ့ တနေရာ ကနေချစ်နေမယ်ဆိုတာ.
♥၁ ခါပဲပြောမယ်.. ၂ ခါမပြောဘူး... ၃ စရာမရှိလို့... ၄ လေးစား⁠စားပြောချင်တယ်... ၅ သိန်းလောက်ချေး... ၆ ခြားမသွားပါနဲ့... ၇ နှစ်နေရင်ပြန်ဆပ်မယ်... ၈ လို့မဆဲလိုက်ပါနဲ့... ၉ ကွယ်စရာဆိုလို့နင်ပဲရှိတော့တယ်...
စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ် တဲ့အခါ မင်းကိုသတိရ။ရှေ့ကိုတွေးတော့လည်း အဝေးကြီးဘဲ။တဘုန်းဘုန်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေလဲပြိုကျ။မယိုင်အောင် ထောက်ထားတဲ့ ဒေါက်လေးတောင် ပြိုကျနေပြီ။
လွမ်းတယ် (အနေဝေးရင်) ... ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်(တစ်ဘ၀စာ)....အရမ်းချစ်တယ်(တစ်သက်လုံး)..... သတိရတယ်(မတွေ့ ရတဲ့အခါ) ... အတူနေချင်တယ်(ပျော်ရွင်စွာ) ... . နမ်းချင်တယ် ... (ဖြူစင်စွာ).... ထိုင်ကြည့်ချင်တယ် (၂၄နာရီ
တကယ့်ဘ၀ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလိုတော့ အပြစ်ကင်းစင်စွာ ပြီးပြည့်စုံနိုင်လိမ့်မည် မထင်ပါ။
မြတ်နိုးလို့ကိုးကွယ်တဲ့အ ချစ်ကို တန်းဖိုးမထားလို့ ပစ်ခဲ့ရင်တောင် နင့်ရဲ့အချစ်ခပ်ပါးပါးလေးကို...ငါက အမြတ်တနိုးတန်းဖိုးထားပြီး ငါကိုးကွယ်နေတုန်းပါ..။
တနယ်ဆီဝေးကွာနေလဲ ချစ်နေမှာ ပြန်ဆုံမယ့်နေ့တွေကိုပဲ တွေးနေခဲ့တာ ပြန်ဆုံမယ့်နေ့တွေကိုပဲ ငါအသက်ရှင်ခဲ့တာ ဆုံဆည်းဖို့အမြဲ ကြိုးစားနေလျက်ပါ
ချုပ်တာဝါသနာပါရင်...အပ်ချုပ်ဆရာလုပ်~ အီတာဝါသနာပါရင်..အီကြာကွေးများများစား ~ကျူတာဝါသနာပါရင်...ကျူရိုးဆောင်....~ ငါ.တော.လာပီးအမှုမပတ်နဲ့.... သောက်ခွက်ပဲ..အရိုက်ခံရမယ်... ပေါက်တယ်နော်~
မမြင်နိုင်ပေမယ့် ခိုင်ခံ့တာက သံယောဇဉ် မတွေ့နိုင်ပေမယ့် မမေ့နိုင်တာက ချစ်ရသူ မပြေးနိုင်ပေမယ့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ရောက်တာကစိတ်
ရည်းစားနဲ့ ပြတ်လို့Never mind....နောက်တယောက်အတွက် Ever smile ....မင်းအတွက်နဲ့ Never cry ..../တယောက်ဆိုတယောက် ပိတောက်ဆိုပိတောက် Of course ပိတောက် ခြောက်တော့နောက်တယောက်ပေါ့နော်
အလိုရှိရင်ငါ့ရင်ခွင်ကို သဲကြိုးတပ် ဖိနပ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာကို အကြိမ်ကြိမ်ပတ်လိုက်ပါချစ်သူ မင်းခြေဖ၀ါးသွေးခြေမဥစေရပါဘူး ဒါပေမဲ့ခုတော့ တလှည့်စောင့်ဦး ဂိမ်းကစားနေလို့အားသေးဘူး.... :
‎*_sorryပဲ...gtalkဖွင်.တိုင်း...chatနေတာမဟုတ်ဖူး မာန်တက်နေတယ်ထင်ရင်..blockနိုင်တယ်... i don't care ပဲ...သဘောပေါက်လား(မပေါက်ရင် ၂ခါပြန်ဖတ် ..၂ခါပြန်ဖတ်လို.မှနားမလည်ရင်... ငါတော် တော် IQ နိမ်.တာပဲလို.တွေးပီး.. လဲသေလိုက်...:x)
တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်သာပုံချစ်မှာပါ ပြန်လှန် ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်တို့ က အေးမြစေမှာ တစ်သက်လုံးပဲရင်ထဲ မပြောင်းနိုင်မယ့်အချစ်ပါ ဒါ့ကြောင့် တို့ ကိုစိတ်ချထား.........
မပြောတတ်တာ မဟုတ်ဘူး... မပြောရက်လို့ ကြည့်နေတာ..... တုံးလို့ မသိတာမဟုတ်ဘူး.... ချစ်လို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးနေတာ..... အယုံလွယ်တာမဟုတ်ဘူး.... နင်အလိမ်ပေါ်မှာစိုးလို့... အရာရာကို ခေါင်းညိတ်ပေးနေတာ..
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲကို sign in နဲ့ဝင်လိုက် sign out နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်နဲ့ မင်းငါ့ကို အင်တာနက်ဆိုင် ထင်နေလား? နောက်ဘယ်တော့မှ ပြန်ဝင်မလာနဲ့!!! မင်းအတွက် connection ကျသွားပြီ..
VIRUSကိုက်နေတဲ့ငါ့နှလုံးသားကို Format ရိုက်ပြီး Window အသစ်တင်မလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အထဲကနင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်ထားဖို့နေရာရှာမတွေ.တာကြောင့် ဒီ Window အဟောင်းလေးနဲ့ပဲ ဒုံရင်း...ဒုံရင်း...
ဘယ်သူမှမကြုံဖူးတာတွေ ငါ့မှာ လာ⁠လာကြုံနေရတာ ဘာကြောင့်လဲဟ ...ကောင်မလေးရေ .. ငါ့ဘေးမှာမနေပေးရင်တောင် အားပေးကြည့်စမ်းပါ ငါသိပ်အလုပ်ရှုပ် စိတ်ရှုပ်နေလို့ပါ။ စိတ်ထဲက ဖြစ်ဖြစ် ခဏလောက် အားပေးပါ
ဒီမယ်......မောင်ရင်... ဒါမြန်မာပြည်ကွဲ့ ...မောင်ရင်ဘာသာ မောင်ရင် OXFORD ကပဲ
ဘွဲ့ယူလာလာ... Harvard ကပဲ ဘွဲ့ယူလာလာ.... အထာရယ် လမ်းကြောင်းရယ် ဂွင်ရယ် မသိရင်... အမှိုက်တောင် ကောက်စားလို့ မရဘူးမှတ် :P
ချစ်သူ နောက်ဆိုရင်လေ ...ငါ့ကိုမတွေ့ရင် FACEBOOK ထဲမှာလဲမရှာနဲ့ GTALK ထဲလဲမရှာနဲ့နော် သူများတကာတွေလို မင်းရင်ခွင်ထဲမှာလည်းမရှာနဲ့ စစ်တပ်ထဲကိုသာလာခဲ့ သေချာပေါက်ငါစစ်မှုထမ်းနေတယ်......
ချစ်သူ ငါ့ကိုမတွေ့ရင်လေ facebook ထဲမှာလဲမရှာနဲ့ chatting ထဲလဲ မရှာနဲ့ သူများတွေလို ဟိုနေရာဒီနေရာလဲ မရှာနဲ့ စစ်တပ်ထဲကိုသာလာခဲ့ သေချာပေါက် ငါစစ်မှုထမ်းနေတယ် ခစ်ခစ် ဗြဲ xxxxD
ပါးစပ်နည်းနည်း ချိုပါ၊ ဦးနှောက်နည်းနည်း ရှင်ပါ။ လှုပ်ရှားမှု နည်းနည်းမြန်ပါ။ အကျိုးနည်းနည်းမြင့်ပါ။ စကားပြော နည်းနည်းညင်သာပါ။ အပြုံးများများပြုံးပါ။ အလုပ်ပိုလုပ်ပါ။ ဒါဟာ အောင်မြင်သူတွေ အောင်မြင်ရတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။
လမ်းတွေ့တိုင်းလဲ မလျှောက်ပါဘူး ......... ပန်းတွေ့တိုင်းလဲ မကောက်ပါဘူး ....... ဒါပေမယ့် လျှောက်မိတဲ့လမ်းမှာ ကောက်မိတဲ့ ပန်းလေးကိုတော့ ....... ထာဝရ သိမ်းထားချင်တယ်..........
နေပါစေ ချစ်သူ နင်နဲ့တွေ့ရမှ ငါ့မျက်ရည်တွေ ခမ်းခြောက်မယ်ဆိုရင် မျက်ရည်မကတဲ့ နှလုံးသွေးပါ ခမ်းပါစေ နင်နဲ့မဆုံတဲ့ အဝေးမှာ ငါ့သိက္ခာကို ငါအဖက်ဆယ် နာကျင်စွာနဲ့ပဲ ငါ….နင့်ကို လွမ်းနေလိုက်မယ်...
မကျိန်းသေတဲ့နောက်ဘ၀ကို ငါမမျှော်ပါဘူးမနက်ဖြန် နင်ငါ့ကိုချစ်နေဖို့တောင် ငါမှာမနည်းဆုတောင်းနေရတာ နောက်ဘ၀ဆိုတာဝေးလွန်းပါတယ်ဟာငါအခု နင့်လောက်ဘယ်သူ့ကိုမှချစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး_I only love u
အချစ်စစ်ဟာ အချိန်ကို ကျော်ဖြတ်တယ်။ အချစ်စစ်ဟာ အကွာအဝေးကို ကျော်ဖြတ်တယ်။ အချစ်စစ်ဟာ နေရာဒေသကို ကျော်ဖြတ်တယ်။ အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ မြတ်နိုးတတ်ဖို့နဲ့ နားလည်တတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
နင်မမှားပါဘူး ငါမမှန်ခဲ့တာ နင်မလာခဲ့ပါဘူး ငါမျှော်လင့်နေမိတာပါ နင်မချစ်ခဲ့ပါဘူး ငါသာရူးမိုက်ခဲ့တာ စုတ်ပြတ်သတ်ခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေအတွက် နောက်ဆုံးအပြစ်ပိုင်ရှင်က ငါပါချစ်သူ....!!!!
ဟိုတစ်ယောက်ကိုလဲ ချစ်တယ် ဒီတစ်ယောက်ကိုလဲ သတိရတယ် နောက်တစ်ယောက်ကိုလဲ မထားရက်ဘူး ဟိုး..တစ်ယောက်ကိုလဲစိတ်ဝင်စားတယ် တေလိုက်ချင်တယ် :P
မပြောတတ်တာ မဟုတ်ဘူး... မပြောရက်လို့ ကြည့်နေတာ..... တုံးလို့ မသိတာမဟုတ်ဘူး.... ချစ်လို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးနေတာ..... အယုံလွယ်တာမဟုတ်ဘူး.... နင်အလိမ်ပေါ်မျာစိုးလို့... အရာရာကိုခေါင်းညိတ်ပေးနေတာ,day-1
ဘယ်တော့မှ မုန်းဖို့မဟုက်ဘူး ။
ဘယ်တော့မှ ငါကဗျာမရေးဘူး ။
ငါက နင်ပြုံးနေရင်♥♥♥ ကျေနပ်သူ နင်ငိုနေရင်♥♥♥အနေခက်သူ♥♥♥နင့်ကိုမတွေရရင်♥♥♥မနေတတ်သူ♥♥♥နင်လိုသမျှပေးဆပ်ချင်သူ ♥♥♥နင်မှားသမျှလည်း♥♥♥မငြိုငြင်တတ်သူ♥♥♥နင့်ကို ဒီလိုရူးသွပ်သူ☺☺☺
ချစ်သူ...........ငါ့ ကိုမတွေ့ ရင် INTERNET ထဲမှာလဲမရှာနဲ CHATTING ထဲလဲမရှာနဲ့ နော်........... COMPUTER လေးမောနေလိမ့်မယ်............မင်းငုံ့ကြည့်လိုက်ပါ........... ငါ ပုန်းနေတာ မင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာလေ♥*♥*♥* (¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯)____♥♥♥_
အမာရွတ်ရဲ့ မလှပခြင်းကို ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့သူမှ သိလိမ့်မယ်…. မျက်ရည်ရဲ့ ခါးသီးခြင်းကို ငိုဖူးတဲ့သူမှ သိလိမ့်မယ်…. အလွမ်းရဲ့ နာကျင်ခြင်းကို ချစ်ဖူးတဲ့ သူမှသိလိမ့်မယ်...***
ချစ်မိသူတစ်ယောက်ကို မေ့ဖို့ကြိုးစားတာဟာ ချစ်ဖို့ကြိုးစားတာထက် ဆယ်ဆပိုပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ မငြင်းပါဘူး မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့မိလို့ လွမ်းရတာကိုကျေနပ်မိတယ်.................
ခဏတာစွဲလမ်းမူ ဖြစ်သည်ကို အကြိုက်ဟုခေါ်ပြီး တစ်ဘ၀တာ မခွဲတမ်းရူးမိသည်ကို အချစ်ဟုခေါ်သည် အကြိုက်တွင် အပြုံးများသာရှိပြီး အချစ်တွင် နှလုံးသားသာရှိသည်... ။
အရိပ်နှစ်ခု ဘယ်နံရံမှာ ထပ်တူပြုမလဲ အချိန်တွေလင့်ကာ လေထဲမှာလဲ အိမ်လေးတစ်လုံး မှေးမှိန်လို့ ကြိုးစားခဲ့တာ အရာမထင်လို့ နှစ်ယောက်သား ဆုံချက်ကလွဲခဲ့ရတယ် စိုးမိုးနိုင်တဲံ့အရာ ငါမှာမရှိ
My name is ဖိုးရှုပ်... All call me အမျိုးယုတ်.... I Live in တဲစုတ်.... I only eat ပဲပြုတ်... I walk in လမ်းစုတ်.. So I meet မိပုတ်... I give her အမှိုတ်ထုတ်... So she beat me with ထီးစုတ်
မရွာဖြစ်သေးတဲ့ မိုးရေတွေ လေးလံနေတဲ
့ငါ့ ကောင်းကင် တိမ်တိုက်တွေ အထပ်ထပ်၊
ငါ့ ရဲ့ အခွံသက်သက်မီးအိမ်မှာ ထွန်းညှိမယ့် 
ပန်းတစ်ပွင့်မင်းမဖြစ်သေးသမျှ အထီးကျန်
အဆင်းရဲဆုံးက စိတ် ---
အရှားပါးဆုံးက အမုန်း ---
အဝေးဆုံးက ချစ်သူ ---
အစောဆုံးက နေ၀င်ချိန် ---
က ပိုအရေးကြိ်းပါတယ် ။.
ဆွေးနေရလောက်အောင်.အသဲမနုဘူး ♥ ...........
တည်ငြိမ်သော connection ကိုလိုလားသည်။
tcp-error မကြာခဏဖြစ်သော connection ကို မလိုလား ...
နင်သာလိုအပ်မယ်ဆိုရင် ငါတော့လေ နင်လိုအပ်တဲ့အချိန်
လိုအပ်တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ နင်လိုအပ်တဲ့အရာလေးပဲ
ကိုယ်ကယူတာ...မေတ္တာ ဆိုတာ ကိုယ်ကပေးချင်တာလေ။
1:35 PM kothu1987: အချစ်ရှိသောကဗျာ
Hello ) ) ) ) ) ) ) ) ချစ်သူ –
ကလင်ကလင် – - -
နား နားဘေးမှာ ထားကာလေး
သူမေးတိုင်း အင်း– အင်း–
Hello – - – ချစ်သူ
ဆက်မယ်လေး မနက်ဖြန်။ ။
တစ်စုံတစ်ရာကို တမ်းတခဲ့ပေမယ့် အဲဒီတစ်စုံတစ်ရာကပဲ
မမကိုလည်းချစ်တယ်... သဲလေးကိုလည်းမခွဲနိုင်ဘူး ... အိမ်ကပေးစားတဲ့သူကိုလည်းတအားသနားတာပဲ .... ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းအမကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ် ....... အွန်လိုင်းကချစ်သူလေးကိုလည်း Q ချင်သေးတယ် :
ချစ်သူရေ မင်းကို စကားပြောရဖို. အွန်လိုင်းမှာ standby စောင်.ရတာလည်းserver တွေတောင် အာစရိခေါ်နေပြီ။ ချစ်သူရေ ငါ့ရဲ.ဇွဲကြီးမှုကို ဇနက္ကတောင် လက်မြှောက်တော့မယ် မင်းကတော့ မသိသလိုပဲနော်
အချို့က ချစ်လျက်နဲ့ကွဲကြတယ်... ဒါပေမယ့်.... မုသားတွေပါတယ် ...။အချို့က ကွဲရက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်... ဒါပေမယ့် .....မာနတွေပါတယ် ....။အချို့က ဝေးလျက်နဲ့ နားလည်ကြတယ်..ဒါပေမယ့်.... အချစ်ဆိုတာပါတယ် ...
သတိရတိုင်း...ပြန်ဆုံဘို့ ပဲ.. အတွေးရှိနေတဲ့..စက္ကန့်တိုင်း...လေ ခုလိုအပျော်တွေများနေတဲ့....နှစ်တနှစ်တွက်.. ချစ်သူရယ်..သတိတရ..လွမ်းရတိုင်း... ငါတယောက်တည်း...ထီးကျန်လွန်းတယ်...
(၁)မင်းမှာ အချိန်အားလေးများရှိရင် ငါ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်ပါလားကွာ။
ကိစ္စအထွေအထူးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက မင်းအသံကို နားထောင်ချင်ကြတယ်လေ...။
မျောက်တွေ စကားပြောတတ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့က မယုံကြဘူးကွ။ ဒါကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော့်ကို မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးဆိုပြီး ရဲစခန်းတစ်ခုမှာ ဖမ်းထားကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ရဲစခန်းကို လိုက်လာပြီး သူတို့တွေ မှားတယ်ဆိုတာ
ဒါပေမယ့် မင်းဆီကို ငါလာလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်....
အကြောင်းကတော့.... ဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့ကောင်က တိရစ္ဆာန်ရုံထဲကို လက်မှတ်မပါဘဲ ၀င်လို့မရဘူးလို့ တားနေလို့ပါ.....။
ချစ်သူက ဖုန်းဆက်ရင်းပြောတယ်....။ လာမယ့် စနေနေ့ သူတို့အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူးတဲ့......။
ချစ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ.... သူတို့အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူး..... တံခါးပေါက်မှာ သော့အကြီးကြီးခတ်လို့ပေါ့....။
အင်မတန်ချောမောပြီး ယောက်ျားပီသတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင် မင်းဘာလုပ်မလဲလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးတယ်။
ကျွန်တော့်အဖြေလား။ ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားရင် ပြောပြမယ်။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ဘယ်ကိုမှ မရွှေ့ဘဲ အဲဒီလူကို စိုက်ကြည့်နေမယ်။
ဒီလူလောက်ချောမောပြီး ယောက်ျားပီသတဲ့လူ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိမှရှိပါ့မလားလို့လည်း တွေးနေမယ်။
အဲ... အဲဒီလူကိုစိုက်ကြည့်နေရတာ အတော်လေးကို ကျွန်တော်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုပါတော့ဗျာ။
ဘာလုပ်ရမလဲဗျ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ မှန်ကို အောက်ချရတော့မှာပေါ့။ မှန်ကို ကျွန်တော်အကြာကြီး ကိုင်မထားနိုင်ဘူးလေဗျာ။
သင့်ရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို သင့်ရဲ့လျှာနဲ့ ထိလို့မရဘူးဆိုတာ သင်သိရဲ့လား။
This cat is catacat good cat way cat to cat keep catacat idiot cat busy cat for cat 20 cat seconds cat!
ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဘူးဟုတ်လား။ ခဏနေပါဦးဗျာ။
အခု... အဲဒီအပေါ်က အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကို cat ဆိုတာတွေ ဖြုတ်ပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ တစ်ခုခုများအဓိပ္ပါယ်ရှိလာမလားလို့ပါ။း)
မင်းနာမည်ကို သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ငါရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရေတွေက အဲဒီနာမည်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။
မင်းနာမည်ကို လေထဲမှာ ငါရေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လေနဲ့အတူ အဝေးကို လွင့်ပါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်။
အဲဒါကြောင့်... မင်းနာမည်ကို ငါ့အသည်းနှလုံးမှာ ရေးထိုးလိုက်တယ်။
ငါဗိုက်ဆာနေတာကို ဘုရားသခင်မြင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ပီဆာတစ်ခု ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။
ငါရေဆာနေတာကို ဘုရားသခင်မြင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ပက်ပ်စီကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။
ငါမှောင်မိုက်နေတာကို ဘုရားသခင်မြင်တယ်။ အဲဒီအတွက် အလင်းရောင်ကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။
ငါအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အပူအပင်ကင်းနေတာကို ဘုရားသခင်မြင်တယ်။ အဲဒီအတွက် မင်းဆိုတဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။
အချစ်စစ်ဟာ နေရာဒေသကို ကျော်ဖြတ်တယ်။
အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ မြတ်နိုးတတ်ဖို့နဲ့
ကလေးရှိရင် ပြန်အမ်းလိုက် ပြတ်တယ်နော်...:P
လွမ်းတယ် (အနေဝေးရင်) ...
သတိရတယ်(မတွေ့ ရတဲ့အခါ) ...
အတူနေချင်တယ်(ပျော်ရွင်စွာ) ... .
နမ်းချင်တယ် ... (ဖြူစင်စွာ)....
ထိုင်ကြည့်ချင်တယ် (၂၄နာရီ) .
မေ့ဖို့ဆို ပိုဝေးတယ် ......